रबि अमेरिका छोडी नेपाल आई संचारजगतमा क्रान्तिकारी भए भन्दै ज्वालाले दिईन सबैलाई सकारात्मक संदेश ,हेरी शेयर गर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
रबि अमेरिका छोडी नेपाल आई संचारजगतमा क्रान्तिकारी भए भन्दै ज्वालाले दिईन सबैलाई सकारात्मक संदेश ,हेरी शेयर गर्नुहोस् ।
काठमाण्डौं। सामाजिक अभियान्ता ज्वाला संग्रौंलाले सामाजिक संजाला मार्फत सबैलाई जागरुक बनाउँदै राम्रा राम्रा सत्कर्म बर्षौं अघिबाट गर्दै आएकी छिन् । उनीने बेथितिमा लाग्नेहरुलाई म’हाकाल बनी ठाउँको ठाउँ तह लगाउने गर्दछिन। त्यसैले गर्दा आँफ्नो गल्ती नभै कसैसँग झुक्न हुँदै हुन्न भनेर सबैलाई जानकारी दिदै आएकी छिन् ।
अभियान्ता संग्रौंलाले बेला बेलामा गज्जबको मोटिभेसनल थट दिदै आएकी छिन आफ्नो सामाजिक संजाल फेस्बुक मार्फत । उनीले अनेकौं अभियानहरु चलाएर धेरै पिडितहरुको सेवा गर्दै आएकी र स्वयम् आफ्नो क्षमता अनुरुप सक्दो सेवा विभिन्न क्षेत्रमा गर्दै आएकी छिन् ।
उनीको सबैभन्दा महत्वपुर्ण भनाई यहाँ उल्लेख छ :
“कसैले ३० बर्षमा बिबाह भएर १० बर्षपछि सन्तान प्राप्त गरे! कसैले ४० बर्षमा बिबाह गरेर १ बर्षमै सन्तान प्राप्त गरे ।कोहि जीबनभर अबिबाहित रहेर त्यतिकै खुसी छन्।कसैले २३ बर्षमा स्ना’तकोत्तर गरे तर ११ बर्षपछि बल्ल खोजेको काम पाए !
कसैले ३५ बर्षमा उच्च शिक्षा पुरा गरे र २ बर्षभित्रै चाहेको काम पाए।कोहि २५ बर्षमा कम्पनीको मालिक भए र ५० बर्ष नपुग्दै उनको मृत्यु भयो।कसैले सोहि पद ५० बर्षमा पाए तर ९० बर्षसम्म मजाले बाँचे। भारतको समय वासिंटन डिसीको भन्दा ९ घण्टा छिटो छ , यस्को मतलब भारत भन्दा अमेरिका ढिलो छ भन्ने हुँदैन।
ओबामाले ५५ बर्षमा अवकाश लिए , जबकी ट्रम्पले ७० बर्षमा सुरुवात गरे! धन कमाउन कोहि घर जग्गा सबै छोडेर युरोप, अमेरिका गए, यता रबि लामिछाने धनको मुख नहेरी अमेरिका त्यागेर नेपाल आएर संचारजगतमा क्रान्तिकारी भएर उदाए। छोटो अवधिमा सारा जनताको मनमा बसेर देखाए।
भन्नुको मतलब,यहाँ सबै’को जीबनको आआफ्नै नियम , महत्व र प्रभावकारिता हुन्छ।कोहि तपाईभन्दा अगाडि जस्तो देखिएलान् , कोहि पछाडिजस्तो, कोहि धनीजस्तो देखिएलान् त कोहि गरिबजस्तो। तर यहाँ उनीहरु आफ्नो समयमा छन् र तपाइ आफ्नो सम’यमा हुनुहुन्छ ।
तसर्थ अरुलाई देखेर आफ्नो जीबन उनीहरुसँग दाँज्नुको कुनै औचित्य छैन ।यति बर्षमा पढिसक्नु पर्छ, यति बर्षमा जागिर खाईसक्नु पर्छ , यति बर्षमा बिहे गरिसक्नु पर्छ र ठ्याक्कै यस्तो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर समाजले लगाएका ना’नाभाँती तगाराहरुमा आ’फूलाई कदापी नरोक्नुस्।
समाजले कसैको जीबनलाई उदाहरण मानेर बनाएका सबै नियमहरु तपाईँका लागि सँधै सहि हुन्छन् भन्ने छैन।आफ्नो जीबनको नियम खुद आँफै बनाउने हो। बरु आफूले सकेसम्म आफ्नो समयमा केहि न केहि राम्रो गर्ने प्र’यास गर्नुहोस्। बाँकी परिणाम तपाँईको समयले तपाईकै निधारमा थमाउने छ ! 😍#motivational_thought”
यो कुरा सबैकोलागी एकदमै राम्रो भएको हुनाले शेयर गर्नको लागि पनि उनीले सबैलाई अग्रहगरेकी छिन् र हामी पनि सबैलाई शेयर गरि सबैमाझ सकारात्मक संन्देश फैलाउनको लागि आग्रह गर्दछौं ।
Previous मैले कसैलाई ‘पाखे’ भनेको छैन भनेर भन्छन् प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापा,हेर्नुहोस
Next लेखाले माग्यो से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र वाइडबडी जहाज खरिद’को छानबिनबारे विवरण,अब होलात छानबिन ?